Amaphupho ngokubeletha (ukuthola umntwana) – iAfrika
Uma ungumuntu wesifazane uphupha ubeletha umntwana, lelo phupho lingaba nezincazelo ezahlukahlukene. Izincazelo zivela ekutheni ubelethe kanjani ephusheni lakho. Uma uphupha ubeletha kabuhlungu noma umntwana enqaba ukuphuma, lokho kuyibika lokuthi kukhona izinto okungezakho (imvamisa inhlanhla) okufanele ngabe sezifikile kuwena kepha kunomuntu okuvimbile lokho. Kanti uma uphupha ubeletha kahle nomntwana aphume ekhala ngengokujwayelekile, lokho kubika ukuthi kunenhlanhla ezokuvelela kungekudala futhi kuzoba yinto yangunaphakade.
13 thoughts on “Amaphupho ngokubeletha (ukuthola umntwana)”
ngcela ukubuza kusho ukuthini ukuphuma ukhulelwe mese kufika umuntu osebenza naye akunike into esajuice uyiphuze mese uphunyelwa isisu , nakhona masiphuma ingane iphuma ngathi imbethe ayichithekanga yabayigazi.
Ukuphupha ukhala kakhulu bekuntshontshela
Kuchaza ukuthini ukuphupha ungumthandazi, kugcwele abantu bathi bezekuwe bazofuna ukuphila, ngibathandazele bonke labantu baphile
Kusho ukuthi unobuzo lokuphilisa okumele ululandele ngokukhuleka ujwayele nokuhamba impophoma ubambe neb
hande muzongena emkhulekweni
Ngiphuphe umama wami ongasekho ngimzalisa umntwana, waphuma ephila untwana.
Leli phupho lingasho izinto eziningi, kuya ngokuthi umbelethise kanjani. Nalu ulwazi esinalo ngalokhu https://iafrika.org/amaphupho-ngokuzala/
Kuchaza ukuthini ukuphuphelwa umama wakho utetile kodwa endaweni engathi yi holo uma ekulindile ngaphandle engathi uzokulanda ngoba kuthiwa utetile kodwa uphume ungaphethe mtwana futhi iqhaqhazela
07/12/2020 at 12:36
02/12/2020 at 03:15
Kuchaza Ukuthini ukuphushwa umuntu uzala amawele mese elilodwa loshone
Izithakazelo zakwa ncengwa